Ezi ọchị banyere Nutcracker Ballet
Ịrụ Arts Ballets kacha mma
George Balanchine si Nutcracker
Okpukpo Ugwu nke Okpukpe Ballet nke Oha na New York City
Nye ọtụtụ ezinụlọ, mmepụta nke New York City Ballet nke onye na-edekọ ihe nkiri George Balanchine's The Nutcracker bụ ọdịnala kwa afọ. Ọrụ mbụ nke mmepụta ewu ewu bụ na February 1954 na New York City. Ọ bụ ihe e ji kee obere ballet site Balanchine maka New York City Ballet nke malitere ọdịnala nke ememe ememme Krismas na ngosi nke ballet na-atọ ụtọ.
Akụkọ nke Nutcracker
ETA Hoffmann dere akụkọ mbụ a kpọrọ Nutcracker na Eze. Onye edemede German a dere akụkọ na 1816 nke otu ejiji egwuri egwu Krismas nke a maara dịka Nutcracker na-abịa ndụ wee wepụ otu nwanyị, onye a maara dị ka onye bụ Marie Stahlbaum, gaa na alaeze ala nke ụmụ bebi mgbe o merisịrị Eze ọjọọ na agha. N'afọ 1844, Alexandre Dumas mere mgbanwe Nutcracker nke a jiri mee ihe dịka atụmatụ nke Tchaikovsky, The Nutcracker. Otu n'ime esemokwu dị iche iche na ballet na akụkọ mbụ bụ na aha Marie na-agbanwe mgbe ọ bụla na Clara.
The New York City Ballet na-emekarị ihe nkiri 50 nke Nutcracker Ballet kwa afọ. N'ịbụ ndị nwere ọrụ abụọ na nnyefe, ihe mmepụta ihe maka Nutcracker nwere ike ịkwụsị ebe ọ bụla site na awa na nkeji iri atọ ruo awa abụọ.
Nke a bụ ihe ọchị ole na ole gbasara arụ ọrụ Nutcracker nke New York City Ballet site n'azụ ihe nkiri, ejiji na imewe na arụmọrụ.
N'okpuru Production Production
Ọnụ ọgụgụ nke mmadụ 57 na-arụ ọrụ azụ azụ iji kwado ihe ọma, ọkụ na ejiji n'oge arụmọrụ ọ bụla.
A na-eji ihe ọkụkụ 600 na 700 eme ihe na ọkụ ọkụ maka mmepụta.
A na-ese ákwà kachasị mma n'ime mmepụta ahụ.
Egwuru egwu nke violin n'oge a gbanwere ebe a na-eme m ka m bụrụ ihe ọzọ nke akwụkwọ Tallet, bụ The Sleeping Beauty .
Na Ogbo Music na nkọwa
Osisi Krismas ukwu toro ruo n'ogo 41 n'ogologo, na-erukwa na 1 ton.
Onu ogugu iri abuo na abuo na-egwu egwu n'ime ndi ogwuputa egwu mgbe ha na-eme.
Egwú egwú maka kọmpi na-adabere n'egwú dị egwu nke Georgian lullaby.
Ihe dị ka pasent 50 nke akwụkwọ na-adaba na ikpere nke na-eme ka oké ifufe ghara ịda.
Ngwa ngwá ọrụ anyị na-anụ n'oge a na-akpọ Sugar Plum Fairya.
N'ime arụmọrụ ọ bụla, ejiji 150 ga-apụta.
Sugar Plum Fairy's gun nwere asaa tulle.
A na-eji ejiji 65 "crystal" mee ihe Dewdrop.
Uwe mpempe akwụkwọ nke mama Ginger na-atụ aro 40 pound.
Ihe ejiji Candy Cane nwere 144 hey hey.
Nanị uwe ndị e ji mee ihe site na mmepụta mbụ nke afọ 1954 bụ ihe nne nne ochie na ihe ndị a na-achọ mma na-eyi uwe ụmụ nwanyị n'oge a na-egwu Tea.
A na-eji akwa obere foto nke ndị New York City Ballet guzobere Lincoln Kirstein na George Balanchine na-eyi uwe nke uwe ndị uwe na-acha na Chocolate Dance.
> Isi: New York City Ballet
Nduzi na 'Nutcracker' Ballet
Kedu ihe bụ àgwà nke oge a?
Ihe niile gbasara isi Nwanyi nke Nutcracker Ballet
Kedu ihe bụ ezigbo paeti maka ụmụaka?
Mee ihe abụọ nke Nutcracker Ballet
Chọta Ballet nke La Sylphide
Ihe kachasị mma nke oge niile
Giselle: Ballet Ballet
Otu n'ime Nutcracker Ballet
Gịnị bụ ịgba egwu egwuregwu?
Chọpụta ọtụtụ ọrụ dị na Tchaikovsky's "The Nutcracker"
The History of Surfboard
Ihe 10 Ntucha Egwu N'ihe gbasara Oriri Aka
Olee Nnukwu Ebube oge ochie ochie?
Egwuregwu Ndị Kraịst Krismas Ndị Kraịst
Kedu Ihe Nkịtị Nwụrụ Anwụ n'Ụwa?
CSUSB GPA, SAT na ACT Data
Kedu ihe bụ Synchrotron?
Ụlọ akwụkwọ Adịkalị University nke Tarleton
Ndi ndi ochichi ndi ochichi choro ka ha weghachi ego ha?
Foto nke Chemicals
ALVARADO - Aha aha na mmalite
American Revolution: Isi General Henry "Ọchịchịrị Na-agba Harry" Lee
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị maara na onye na-enyo enyo na kọleji
Agha Amụma: Agha Nassau
Seabiscuit vs. Admiral Agha bụ Kasị Ukwuu Egwuregwu nke Narị Afọ
Ihunanya Shakespeare Quotes
Kedu Ka E Si Eme Ka Al-Fitr Bịa na Islam?
'Il Me Semble Que' Achọrọ Mmetụta A?
Atụmatụ Astral: I Nwere Ike Ime Ya
Akwụkwọ Mgbasa ozi Business: Ntụle akwụkwọ ngbanwe
Banyere PHP Filemtime () Ọrụ
Esi kpoo kpoo Golf
Chọpụta oge obi ike maka a pụtara mgbe ị maara Sigma